သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: နံပါတ် ၈ များနှင့် ခရီးထွက်ခြင်း
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:36 PM
အင်း..မြှားနတ်မောင်ရုပ်နဲ့ အ၀ါရောင်ပန်း ၈ပွင့်ဆိုတော့ ဘာဂိုဏ်းလည်းမသိ။
အဲဒီ ခံစားချက် ဟာ.. ဘယ်လိုပါလိမ့်။
မလေး... အဆန်းတကြယ်ပါပဲ။ ဖတ်ရတာ မျောသွားတယ်။ စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ စပ်စုချင်စိတ်ကြောင့်လည်း ဖြစ်မှာပေါ့။ ဘာလဲ ဘာလဲ ဆိုပြီးတော့။... မလေးရေ... အရေးအသားတွေ အားပေးနေတယ်နော်။
(ဖတ်ပြီး ရေရွတ်မိသော အသံ)
ဒီနိုင်ငံမှာတော့ ၈ ဂဏန်းကို LUCKY No. ၇ယ်လို့
အမြတ်တနိုး လိုချင်ကြတယ် မအိမ့်၇ဲ့ ..
နှစ်ကူး ဟုန်ပေါင်း ပေးတာက အစ ၈၈ တို့ ဘာတို့ပေးတတ်တယ် ..
စာလေးက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် ..
အဖိုးကြီးနဲ့ မတွေ့ခင်အထိမြင်ကွင်းလေးတွေကို သဘောကျမိတယ်..
dialog တွေထဲက အနုပညာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အတွေးအမြင် လေးတွေကိုလည်း လက်ခံမိပါတယ် ..
အိကတေ့ာ ၃ ဂဏန်းကို ကြိုက်တယ်.. ^.^ ..
စကားပြောတွေ အရမ်းကြိုက်တယ် မလေး
အသစ်တင်ထားကြောင်း ကျနော့်ကွန်ပြူတာ live Show မှာ အချက်ပြထားတာနဲ့ အားတက်သရော ၀င်လာပြီး ဖတ်သွားပါတယ်။ တင်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဖတ်ပြီးတော့ ထုံးစံအတိုင်း အသံတိတ်ပြန်သွားမလို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ အစာမကြေဖြစ်သွားတာလေး ရှိလို့ အခုလို မှတ်ချက်စကားဝိုင်းထဲ ၀င်လာခဲ့တာပါ။
မအိမ့်တင်ပြချင်တဲ့ စကားလုံးတွေရဲ့ အနှစ်သာရနဲ့ အားပြည့်မှုတွေအတွက်တော့ ကျနော်အများကြီးလက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအဘိုးကြီးကို ဘယ်သူလဲဆိုတာ ကျနော်ရှာလို့မတွေ့ဘူးဖြစ်သွားတယ်။ သူက တခြားလူတယောက်ရဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းတိုက်ဆိုင်မှုတွေကို သိနေတယ်ဆိုတော့ သူက ဘယ်သူမို့လို့လဲ။ လူတယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်အခုမှ စတွေ့ဖူးတဲ့ လူတယောက်က ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် သတိမထားမိခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုတွေကို ကိုယ့်ထက်ပိုသိနေတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ တော်တော် ဆန်းကြယ်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တခုပဲ။ အဲဒီ အဘိုးကြီးကို ကျနော်လိုက်ရှာတယ် သူဘယ်သူလဲပေါ့။ မတွေ့ဘူး။ သူက အကြားအမြင်ရနေတဲ့လူလား.... ကောင်းကင်ပေါ်က စေတမန်တော်တယောက်လား.... ပိုင်ရာဆိုင်ရာက ပေါ်လာတဲ့လူတယောက်လား.... စိတ်ကူးဇာတ်ကောင်တခုလား....တကယ်သက်ရှိတယောက်လား.... ကျနော်ရှာလို့မရခဲ့ဘူး။
ဘာသာတရားယုံကြည်ချက်နဲ့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အား စကားလုံးတွေအတွက် ကျနော်အများကြီးလက်ခံပါတယ်။
တခါက အိန္ဒိယပြည်က ဘုန်းကြီးတပါး ရှင်သဒ္ဒါကစ္စည်းထင်တယ် လူစိမ်းတယောက်ကမေးတယ် အသင်ဘယ်သူလဲဆိုတာ့ ငါက ကမ္ဘာပေါ်က လူသားတယောက်ပါလို့ ပြန်ဖြေခဲ့တယ် ဆိုပြီး ဘာသာတရားနဲ့ ကမ္ဘာလုံးအယူအဆကို ထုတ်ပြောခဲ့တယ်လို့ မှတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘာသာတရား တခုတည်း ဖြစ်ရေးကို ကျနော်လက်မခံပါဘူး။
တဆက်တည်းမှာပဲ ကျနော့်ဘလော့မှာ ထည့်ထားတဲ့ နောက်ခံ ပုဂံဘုရားများဓာတ်ပုံကို ခွင့်ပြုပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ပြောချင်တာတွေ များသွားလို့ ၀င်ရေးခဲ့တာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မအိမ့်ရဲ့ ခံစားချက် တင်ပြမှု လက်ရာလေးတွေကတော့ နူးနူးညံ့ညံ့ သိမ့်မွေ့စွာနဲ့ အားပေးသူတွေအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းတဲ့ အရေးအသားတွေ ဖြစ်နေဦးမှာပါ။
ကောင်းလှချည်လားမအိမ့်ရ. ပန်းရောင်အတွေးတွေ ကြိုက်တယ်. ရှစ်ဓါတ်တောင် ကူးသွားလားမသိဘူး ဒီနေ့ဒီမှာ ၁၇ ရက်နေ့ဗျ. :)
ကိုတက်စ်ပြောသလို ဒီနေ့ ၁၇ရက်နေ့ဗျ အဲတော့ အဟိ ၈ခေါက်ဖတ်သွားတယ် ညနေအကြောင်းထူးရင် ဆီဗုံးမှာလာပြောပြမယ် ဘာလဲဆိုတာ :P
ဒီနေ့မှ လာဖတ်ဖြစ်တယ်။ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး ခံစားလိုက်ရတယ်။ ကြိုက်တယ်။
၈ ဂဏန်းနဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုတွေကို စိတ်ကူးပုံဖော်ပြီး ၀တ္ထုသဏ္ဍာန် ရေးထားတဲ့ ဒီစာမှာ ပြောချင်၊ ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့လေးတွေကို ကြားညပ်ရေးသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီထဲက ဇာတ်ကောင် `အဘ´ ရဲ့ အရာရာကို သိလွန်းတဲ့ ကာရိုက်တာကတော့ အတန်ငယ် ယုတ္တိလွန်နေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ မြင်ကွင်း ပုံဖော်အရေးအသားကို နမူနာယူ လေ့လာသွားပါတယ်။